Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ၉၀ ခန့် လူဝင်မှုဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ၉၀ ခန့် လူဝင်မှုဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ သဲခုန်ကျေးရွာကိုဆိုက်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်နိုင်ငံသား (၈၄) ဦးကို မြန်မာ အာဏာပိုင်တွေကနေ ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး လူဝင်မှု ကြိကြပ်ရေးဥပဒေပုဒ်မနဲ့ ထောင်ဒဏ် တနှစ် ချမှတ်ခဲ့ပါ တယ်။ ထောင်ချခံဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေဟာ ပြီးခဲ့တဲ့လက မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကို ဒုက္ခသည် အဖြစ် ၀င်ရောက်လာခဲ့ပြီး ပြန်လည်လွှတ်ပေးရာကနေ အခုတဖန်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒီအခြေအနေအပြည့်အစုံကိုတော့ ထိုင်းအခြေစိုက်သတင်းထောက် နိုင်ကွန်းအိန်ကနေ အခုလိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်၊ သဲခုန်တံငါစခန်းကိုရောက်လာတဲ့ စက်လှေတစ်စီးပေါ်က ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နိုင်ငံသားတွေကို ရေးမြို့နယ် လူဝင်မှုကြိကြပ်ရေး ဌာနနဲ့ မြို့နယ်ရဲစခန်းတွေကနေ တရားမ၀င် ပြည်တွင်း ခိုးဝင်မှုဥပဒေနဲ့ အပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့တယ်လို့ ရေးမြို့၊ မြို့မရဲစခန်းကနေ အတည်ပြု ပြောဆိုခဲ့ ပါတယ်။
မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်ပိုင်နက်ထဲကို ၀င်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသားတွေကို လူဝင်မှုကြိကြပ်ရေး အက် ဥပဒေပုဒ်မ ၁၃/၁ နဲ့ အရေးယူခဲ့တယ်လို့ ရေးမြို့၊ မြို့မရဲစခန်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အခုလိုပြောပါတယ်။
“ဘင်္ဂလား ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကို ကျနော်တို့ မော်လမြိုင်အကျဉ်းထောင်ကို ပို့လိုက်ကုန်ပြီ၊ ထားဝယ်အပိုင် ကနေ မိတာ။ ထောင်ဒဏ် တနှစ်စီ ချလိုက် တယ်။ လ.၀.က Act နဲ့။ လှေပေါ်မှာအားလုံး (၈၄) ယောက်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ဟိုဥစ္စာပဲပြန်မိတာ။”
ဒီတရားမ၀င် ၀င်ရောက်လာတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသားတွေကို ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့က ရေးမြို့နယ် တရားရုံး ကနေ အားကစားရုံအတွင်းမှာ ယာယီတရားရုံး ဖွင့်ပြီး စီရင်ချက်ချမှတ်ခဲ့ပြီးတော့ ဇွန်လ (၁၉) ရက်နေ့ မှာ မော်လမြိုင် အကျဉ်းထောင်ကို ပို့ခဲ့တယ်လို့ ရေး မြို့မရဲစခန်းအရာရှိတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
တကယ်တော့ ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နိုင်ငံသားတွေဟာ မေလ (၂၃) ရက်နေ့ကတည်းက စက်လှေ ပျက်ပြီး ရေးမြို့နယ် ငါးမျှားစခန်းမှာ ၀င်ရောက်လာခဲ့တဲ့ သူတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ စက်လှေပြန်အထွက်မှာ စက်လှေချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် အခုလို ကမ်းဘက်ကို ပြန်ကပ်လာရတယ်လို့ ဒေသခံ သဲခုန်ကျေးရွာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးက မွန်ဘာသာနဲ့ အခုလိုပြောပါတယ်။
“အဲဒီလှေက သဲခုန်ရွာကိုဝင်လာတယ်။ လူ (၈၆) ယောက်ပါလာတယ်။ အဲဒီဆိုက်ရောက်တဲ့နေ့မှာ (၂) ယောက် ပျောက်သွားတယ်။ သူတို့တတွေက ငါးမျှားစခန်းကနေ ထွက်ခွာလာပြီး မန်ကျည်းကျွန်း ကိုရောက်လာတယ်။ အဲဒီမှာလှေပျက်လာပြီးတော့ ကျွန်မတို့ သဲခုန်ရွာဘက်ကို ၀င်လာတယ်။ လှေပြင်ဖို့နဲ့ စက်ဆီဝယ်ဖို့အတွက်လို့ ပြောတယ်။ အခု မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက ရေးမြို့ဘက်ကိုခေါ်သွားပြီ၊ သူတို့ တတွေကို။”
မလေးရှားနိုင်ငံကို တရားမ၀င်အလုပ်လုပ်မယ့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ နိုင်ငံသား (၈၆) ဦးပါ တန်ကေးစက်လှေ တစီးဟာ စက်ချွတ်ယွင်းမှုကြောင့် ပြီးခဲ့တဲ့မေလ (၂၃) ရက်နေ့က မွန်ပြည်နယ်၊ ရေးမြို့နယ်ကမ်းခြေ ဘက်ကို ဒုက္ခသည်အဖြစ် ရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဒုက္ခသည်တွေဟာ ကပ္ပလီ ပင်လယ်ပြင် ထဲမှာ ရက်ကြာကြာ လှေမျောနေပြီး အစာရေစာငတ်မှုကြောင့် လမ်းခရီးမှာ သေဆုံးမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ စက်လှေပျက်ဒုက္ခသည်တွေရဲ့စားဝတ်နေရေးနဲ့ ယာယီနေထိုင်ရေးအတွက် ဒေသခံ ရွာသားတွေကနေ ကူညီစောင့်ရှောက်ထားပြီး ဒေသခံ အာဏာပိုင်တွေကနေ စစ်ဆေးမေးမြန်းပြီး မူလဒေသကို ပြန်လည် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရာကနေ အခုတဖန် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက် လူဝင်မှု ကြိကြပ်ရေး အက်ဥပဒေပုဒ်မနဲ့ အရေးယူရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အမည်မဖော်လိုသူ ဥပဒေအရာရှိ တဦးက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိအခြေအနေအရ ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်မှာ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေနဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်သားတွေအကြား တင်းမာမှု ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့် မွန်ပြည်နယ်အတွင်း လူမျိုးခြားတွေ ၀င်ရောက်မှာကို စိုးရိမ်နေတယ်လို့ ဒေသခံသံဃာတော်တွေက ပြောဆိုမှုတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
Posted by ကျောက်ဖြူသားချေ at 03:25
Copyright © 2011. Bengali Rohingya Terrorist Attack in Arakan, June 2012: ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံသား ၉၀ ခန့် လူဝင်မှုဥပဒေအရ ထောင်ဒဏ်ချမှတ် . All Rights Reserved